Ma riyaa mise waa run? – Aminawehelie.me
By aminawehelie on June 12, 2020 • ( Leave a comment )
June 12th, 2020, (AminaWehelie.me) -Wararka ku dhow-dhow madaxtooyada Soomaaliya iyo warbaahinta kala duwan ee Soomaaliyeed, ayaa tibaaxaya, in khilaaf iyo is-afgaradwaa’ uu hareeyey madaxda ugu sareysa ee dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya.
Khilaafka ayaa ka dhashay muddo korosi uu doonayo Madaxweynaha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, taasoo uu aad u daneynayo, halka Ra’iisulwasaarihiisa Xasan Cali Kheyre uu doonaayo in Doorashooyinku ku dhacaan, xilligii loogu talagalay weliba markan uu isagu isa soo shaaraxo oo ku dhawaaco xisbi siyaasadeed uu in muddo ah bisleynayey, hase yeeshee war intaba ka duwan ayaa isagana jira.
Wxaa soo baxaya xog culus oo la xiriirta, qorshe cusub oo in muddo ahba la diyaarinayey, taasoo sheegeysa in midow cusub oo uu Maamulka Somaliland ku ogolaanayo Dowladda Federaalka ah ee Somaliya, la dhiso, sida ay ogaatey warbaahinta Soomaalida qaarkeed.
Qorshahan oo uu riixayo dalka Maraykanka, ayaa waxaa sidoo kale gadaal ka taagan ururrada Midowga Afrika, Midowga Yurub, dowladaItoobiya iyo tan Jabuuti, waxaa uuna ujeedku yahay, in la helo qorshe dib loogu dhidbayo midnimo dhexmartay Koonfurta iyo Waqooyiga Somaliya mar kale, qorshahan ayaa shaxda loo dajiyey tahay, in Madaxweyne laga dhigo siyaasi ka socda dhanka Somaliland oo lagu wado in uu noqdo madaxweynaha ruug-cadaagga ah ee Soomaaliland (Muuse Biixi Cabdi) Ra’iisal Wasaaruhuna uu ka yimaado Koonfurta laguna wado in uu noqdo (Xasan Cali Kheyre, oo hadda ah raisuulwasaaraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ay u harsan tahay dhowr bilood oo kooban.
Waxaa qorshahan seeska u dhigay, Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed, oo howshaan markeedii horeyba ku bilaabay si isku-xil-qaan ah, kaddib kulankii uu isugu keenay Madaxweynaha Somaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Madaxweynaha Maamulka goonida u taagan ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi, kaasoo ah kullan aan aad loo shaacin.
Abiy Ahmed ayaa isagu ku andacoonaya in arrintaani dhameynteeda uu u xil saaray Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, iyadoo misna lagu wado inay magaalada Jabuuti isugu tagaan toddobaadyada soo socda wufuud culus oo kala duwan oo ka kala socda labada dhinac.
Xogtaan oo ah mid aad looga qarinayo shacbi-weynaha guud ee Soomaaliyeed, ayaa jadwalku yahay, sida wararkan isa-soo-taraya sheegayaan, in uu magaalada Jabuuti tegi doono Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed C/llaahi Farmaajo oo uu wehlinayo Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, in kastoo iminka ay hoostooda ka dhalatay iskuna heystaan arrimo culus oo dowladda ay ka wada arrimiyaan dhexdeeda ah, iyo dhinaca kale oo uu ka imaanayo Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi iyo xubno uu isagu soo xushay oo mucaaradka Soomaaliland iyo dowladiisaba ka tirsan, sidoo kale waxaa iyadana la filayaa in iyo wefdi ballaaran oo ka socda dalalka Mareykanka iyo dalalka kale ee reer Yurub ee daneeya arrimaha Soomaaliya, ay iyaguna tagaan Jabuuti.
waxaa sidoo kale shirka ka qeyb gelaya wafuud fara badan oo caalamka ka kala yimid iyo ururka Midowga Afrika ah, oo ciidamo farabadani ka joogaan Soomaaliya.
Haddii xiisadda hadda taagan oo ah mid baajin karta, arrintaan la qaboojiyo, laguna guuleysto qorshahan, ayaa waxaa lagu wadaa inuu xilka iska casilo Madaxweyne Farmaajo oo bilo dhowr ihi xilka uga hareen, hase yeeshee ma ahan wax uu aad u daneynayo Farmaajo, oo wuxuu ka door-bidayaa in uu daaqadda ka saaro, Ra’iisulwasaarihiisa Xasan Cali Kheyre oo ah mid aad ula soo shaqeeyey, welibana la dhihi karo in uu ahaa kan howlada dowliga ah ee maalinlaha ah kala waday.
Wararkaan ayaa sheegay in qorshuhu yahay, in muddo laba sano ah lagu dhisi doonaa xukuumad uu Madaxweyne ka yahay Madaxweynaha Somaliland, Ra’iisal Wasaarena uu ka yahay Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, waana halka uu iminka ka soo minguursaday Madaxweyne Faarmaajo in isaga laba sanno loogu darro.
Yeelkeede, arrintani waxay u baahan tahay, waqti ka badan kan hadda lagula hamiyayo, si labada dhinac isula gorfeeye intii suurta gal ah.
Inkastoo qorshahani uu si hoose ku socday muddo sanad ka badan, waxaa hadda dibada u soo saaray, khilaafka dhinaca kale ka yimid ee ay duco-duceeyneyso dowladda Qadar, waxaana arrintan si hoose u taageersan, dowladda Mareykanka oo hadda isku dayeysa in eey damiso, dabka dhinaca kale ha soo fufaya.
Dadka u dhuun-daloola arrimaha caalamka iyo waxgaradka Soomaalida ayaa qaba, in haddii aan la helin xal siyaasadeed oo ay la timaado Soomaalidu, ay gebi ahaanba halis ku jirto dowladnimada guudba, maadaama iminka soddon sano ka badan ay ku soo badbaadday Soomaaliya Xeerka Caalamiga ah, oo kolba marka uu khilaaf dhexdooda ah dhacaba dhinaca laga laadaayey, misna dib la isugu ka-kabayey.
Maraykanka ayaa aaminsan in Ra’iisulwasaare Xasan Cali Khayre yahay nin isku wadi kara Soomaalida Koofur iyo Waqooyi, oo marka ay timaado Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhaama wax badan.
Lamase oga halka arrimahaan is wada dhex yaacaya, ku dhamaan doonaan, waxaase marag-ma-doonto ah, in indhaha caalamka oo dhami ay Soomaaliya soo wada eegayaan.
80,870 Waxaa aqrisatay